Kooxda Manchester City oo laga soo diiday dalab ku kacaya 92 milyan oo gini ah oo ay ku doonaysay Jose Gimenez – Gool FM
Man City oo garoonkeeda Etihad guul weyn kaga gaartay kooxda Crystal Palace… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Barcelona iyo Athletic Bilbao ee Final-ka Spanish Super Cup oo la shaaciyey
Kooxda Manchester City oo laga soo diiday dalab ku kacaya 92 milyan oo gini ah oo ay ku doonaysay Jose Gimenez
Haaruun September 14, 2020
(Madrid) 14 Sebt 2020. Sida wararku ay sheegaan kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa laga soo diiday dalab qaali ah, kaasoo ku kacaya 92 milyan oo gini ee ay ku doonaysay saxiixa daafaca Atletico Madrid ee Jose Gimenez.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola ayaa indhaha ku haysa inay xoojiso daafaceeda kaddib ololahoodii ugu xumaa ee Premier League markii ugu dambeeysay oo ay qasaartay sagaal jeer, waxaana ay kula soo wareegeen Nathan Ake adduun dhan 40 milyan oo gini.
Jariiradda Marca ayaa warinaya in Man City ay daafaca reer Uruguay miiska u saartay dalab lacag qaali ah ku kacayay oo dhan 92 milyan oo gini, balse ay iska diiday kooxda Atletico Madrid.
Kooxda ka dheesha horyaalka La Liga ayaa la soo warinayaa inaysan doonaynin inay aqbasho dalab ka hooseeya 111 milyan oo gini oo ah lacagaha lagu burburin karo heshiiska laacibkan, halka daafaca dhexe qudhiisa uu arko inuu mustaqbal fiican ku leeyahay Atletico.
Gimenez ayaa u soo dhaqaaqay kooxda ka dhisan caasimadda Spain sanadkii 2013-kii, waxaana uu kaga soo biiray dhinaca Danubio, isagoo u saftay kooxda Atletico Madrid 191 kulan.
Xagaagii la soo dhaafay, 25-sano jirkaan ayaa qalinka ku duugay qandaraas cusub oo waqti dheer ah oo uu ku sii joogayo garoonka Wanda Metropolitano ilaa sanadka 2023-ka, isagoo qandaraaskiisa cusub oo ay ku jirto in lagu burburin karo adduun dhan 111 milyan oo gini.
Gimenez ayaa loo magacaabay mid ka mid ah afarta kabtan ee kooxda uu hoggaamiyo tababare Diego Simeone xilli ciyaareedkan.
Maxaa ka jira in Kooxda Real Madrid ay gashay heshiis qarsoodi ah oo ay kula soo wareegeyso Lautaro Martinez!?
Shaxda rasmiga Kooxaha Brighton iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey